Amina Yuguda oo heshay abaalmarinta Komla | barbaarmedia.com
Home Arrimaha Bulshada Amina Yuguda oo heshay abaalmarinta Komla
adminSep 19, 2017Arrimaha Bulshada, Wararka0
Abaal marintan waxa loogu talo galay in lagu xuso Komla Dumor oo ahaan weriye ka tirsan BBC World News oo si kedis ah u geeriyooday sannadkii 2014-kii isaga oo 41 jir ah. Marwo Yuguda waxay sheegtay in guushaa ay gaadhay “sharaf weyn” u tahay.
“Farxad baa i saaqday, dadka wararka tebiyaa door muhiim ah ayey Afrika ka ciyaaraan…waana waxa na lagu yaqaan. Warfidiyeenkuna maanta masuuliyadoodii way ka soo baxayaan” ayey tidhi.
“In kasta oo aanay wax barasho badan lahayn, hadana dadka dalkaygu waxay aragtiyo kala duwan ka qabaan oo ay xog ka heleen arimaha ay ka midka yihiin madaxtinimada Trump ee Maraykanka, keni adayga Kuuriyada Woqooyi, siyaasadda arimaha dibadda Ruushka ee Putin iyo arimo kale oo badan”.
Agaasimaha guud ee BBC World Service Group, Francesca Unsworth, ayaa sheegtay in marwo Yuguda u qalanto guushaa, waxaanay tidhi ” in aanu aragno qof leh in badan oo xirfadii Komla oo kale ah waa wax lagu faano aad baanan ugu faraxsannahay in Amina nala shaqayso”
Next PostMadaxweyne Trump oo khudbadiisa ugu horeysay ka jeedinaya shirka Golaha Guud ee QM